အာဆီယံနိုင်ငံများမှတင်ပို့သည့် အသီးအနှံများအား တရုတ်နိုင်ငံတွင် တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုဖြင့် ရောင်းချခြင်းအောင်မြင် - Xinhua News Agency
နန်နင်း၊ နိုဝင်ဘာ ၁၅ ရက် (ဆင်ဟွာ)
ယခုကာလသည် အာဆီယံ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ၌ ဒူးရင်းသီး၊ အုန်းသီး ၊ မင်းဂွတ်သီး စသဖြင့် အသီးအနှံများလှိုင်လှိုင်ထွက်သည့်ကာလဖြစ်သည်။ တရုတ်နိုင်ငံတောင်ပိုင်း ကွမ်ရှီး (ကျွမ့်) ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ၊ နန်နင်းမြို့ရှိ အီလက်ထရောနစ်စနစ်ဖြင့် ကုန်စည်ရောင်းဝယ်သည့် အသီးအနှံဂိုထောင်၌ အာဆီယံဒေသများမှ တင်သွင်းလာသည့်အသီးအနှံများကိုအွန်လိုင်းမှ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုဖြင့် ရောင်းချခြင်းပြုလုပ်ရာ ဝယ်ယူသူများပြားလျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
Guangxi Youxianyuan Agricultural Technology Co.,Ltd မှ ဥက္ကဌဖြစ်သူ Qin Qingxian ”ကျွန်တော်တို့က ဖောက်သည်တွေနဲ့ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုကတဆင့် ချိတ်ဆက်ရောင်းချတာပါ၊ ဖောက်သည်တွေကလည်း ကျွန်တော်တို့ အသီးအနှံတွေ တိုက်ရိုက်ပြ ပြီး တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပြီးရောင်းမှကြိုက်တာပါ။ ကျွန်တော်တို့က ဝယ်သူတွေကို သူတို့လိုချင်တဲ့အတိုင်း အသီးတွေရဲ့ အစိမ်းအမှည့်အမျိုးမျိုး၊ အရည်အသွေးအမျိုးမျိုး၊ အရွယ်အစားအမျိုးမျိုးကိုပြပေးရတာပါ” ဟုဆိုသည်။
တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပြီးအသီးရောင်းချသူ Zhang Deyuan က “နယ်စပ်အသီးရောင်းဝယ်ရေးမှာ တိုက်ရိုက်လွှင့်ပြီးရောင်းတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ ကျွမ်းကျင်ဗဟုသုတရှိဖို့လိုပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ဒူးရင်းသီးလိုအသီးမျိုးကိုရောင်းချရတဲ့နေရာမျိုးမှာပေါ့၊ ခင်ဗျားတို့ တစ်ခါလောက်ရောင်းပြီးတာနဲ့ဝယ်သူကိုပါ ဘယ်လိုအသီးမျိုးဝယ်သင့်တယ်ဆိုတာသင်ပေးရပါတယ်၊ အဲဒါမှ သူတို့က ခင်ဗျားတို့ကိုယုံကြည်မှုပိုတိုးလာပြီး အရှေ့တောင်အာရှက တင်သွင်းလာတဲ့ အသီးတွေကို ဝယ်ချင်မှာဖြစ်ပါတယ်”ဟုဆိုသည်။
ထင်ရှားကျော်ကြားသူများအား ဖိတ်ခေါ် ကာ အရှေ့တောင်အာရှ နိုင်ငံများမှ ထွက်ကုန်ပစ္စည်းများကို တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုဖြင့် ရောင်းချခြင်းပြုသလို ယင်းကုန်စည်များ တရုတ်နိုင်ငံဈေးကွက်ထဲသို့ တင်ပို့နိုင်ရန် ကူညီဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိသည်။
တရုတ်နိုင်ငံနှင့် အာဆီယံနိုင်ငံများအကြား အပြန်အလှန်ကုန်သွယ်မှုမှာ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ပထမ နှစ်ဝက်မှာပင် ယွမ် ၂.၆၆ထရီလီယံ (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၄၁၂ဘီလီယံခန့်) ရှိခဲ့ပြီး တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ် ၂၇.၈ ရာခိုင်နှုန်းတိုးတက်လာသောကြောင့် အကြီးဆုံးကုန်သွယ်မှုမိတ်ဖက်များဖြစ်ကြောင်း တရုတ် နိုင်ငံအကောက်ခွန်ဌာနမှထုတ်ပြန်သည့်အချက်အလက်များအရသိရသည်။
ကွမ်ရှီး ဒေသ သည် ပထဝီဝင်အနေအထားအရ တရုတ်နိုင်ငံ၏ အာဆီယံနိုင်ငံများနှင့် တံခါးဖွင့် စီးပွားရေး ရှေ့တန်းမှ ကျင့်သုံးသည့် ဒေသဖြစ်ပြီး အာဆီယံနှင့် ခိုင်မာသောကုန်သွယ်မှု ကြောင့် မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း ၎င်း၏နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် အီလက်ထရောနစ်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးကဏ္ဍသည် အရှိန်အဟုန်ဖြင့် ကြီးထွားလာခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
တရားဝင်အချက်အလက်များအရ ယခုနှစ် ဇန်နဝါရီလမှ ဇူလိုင်လအတွင်း ကွမ်ရှီးဒေသ၏ နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် အီလက်ထရောနစ်ကုန်သွယ်မှု ပို့ကုန်သွင်းကုန်ပမာဏမှာ နှစ်အလိုက်တိုးတက်မှု ၄၄၆.၃ ရာခိုင်နှုန်း ရှိခဲ့သည်။ (Xinhua)
GLOBALink | Livestream powers China-ASEAN cross-border fruit trade
NANNING, Nov. 14 (Xinhua) — Durian, coconut, and mangosteen… It’s the peak season for fruits from ASEAN countries. Workers are busy with packing them in an e-commerce warehouse in Nanning, South China’s Guangxi Zhuang Autonomous Region, whilealivestreamer selling them online.
Famous influencers have been invited to livestream for products made in Southeast Asian countries, helping those products enter the Chinese market.
Guangxi is at the forefront of China’s opening-up to ASEAN thanks to its geographical proximity, and the region has seen its cross-border e-commerce sector boom in recent years on the back of strong trade with ASEAN.
According to official data, from January to July this year, Guangxi’s imports and exports in cross-border e-commerce surged 446.3 percent year on year.